နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Start Menu icon Changer V2.6
Start Menu icon Changer V2.6
၀ငျးဒိုး7ထဲမှာပါတဲ့ start menu icon လေးကိုပွောငျးခငျြကွတဲ့ သူငယျခငျြးမြားအတှကျ..ဆော့ဝဲကောငျးလေးနောကျ တဈခုတှထေ့ားပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ကှနျပွူတာထဲမှာ ရှိတာတော့တျောတျောလေးကွာနပေါပွီ မအားလို့သာဘလော့ထဲ မတငျဖွဈတာပါ။ ခုပေးထားတဲ့ဆော့ဝဲလေးက Crack တှဘောတှမေလိုပါဘူး...free version လေးပါခငျဗြာ၊ စတိုငျ ထှငျတာကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျ တျောတျောလေးအသုံး ၀ငျမယျလို့ထငျပါတယျ။ ကြှနျတျောပေးထားတဲ့ဖိုငျလေးထဲမှာ သူ့ဖိုဒါနဲ့ icon ပုံတှတေဈခုရှိပါတယျ၊ Extract လုပျပွီးရငျ အဲဒီ ဖိုဒါ ဘယျမှာရှိလဲဆိုတာ မှတျထားရပါလိမျ့မယျ။ ပေးထားတဲ့ ဖိုငျထဲကပဲ orbchanger.exe ကိုဖှငျ့ပွီး start menu icon လေးကိုနှိပျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ သူခုနက icon ပုံနဲ့ပွညျ့နတေဲ့ ဖိုဒါ ထဲက ကွိုကျတဲ့ icon လေးကို ရှေးပွီးတော့ အိုခေ နှိပျလိုကျပါ။ ခဏစောငျ့ပွီးရငျ taskbar ပွနျပျေါ လာတာနဲ့သူ့အိုငျကှနျလေး ပွောငျးသှားတာကို တှရေ့ပါမယျ။ ကယျသူငယျခငျြးတို့ရေ ကှနျမနျ့ မတတျတဲ့သူတှအေတှကျ လညျးဗီဒီယိုလုပျ တငျပေးလိုကျတယျ။ အောကျမှာသှားကွညျ့လိုကျကွပါ။
Posted by P Kyaw Swa at 10:58 AM
Labels: Window 7
▼ October 2011 (223)
How to install iOS 5
သင့် Google/gmail account ကို hack ခံလိုက်ရရင်ဘာလု...
Steps to Write Protect your USB Pen Drive
Gamer Retail CD Keys
7-zip is the best archive program
How to add Skype to the Ubuntu messaging Menu in U...
U4MDY (Ubuntu For Mandalay)
Introducing Windows Server 2008 R2 Ebook
Creating bootable USB (3)-Ubuntu
Creating bootable USB (2)
Creating bootable USB (1)
Install Backtrack5in VMware or Virtual Box
How to install: Backtrack5onabootable Usb
Backtrack5R1 ကိုလေ့လာဖို့ ကြိုးစားကြည့်ရအောင်
Ubuntu အသုံးပြုသူများအတွက် Virtual Box
သာလွန် မြန်မာ OS Beta 1.0 Install လုပ်ပုံ
သာလွန် မြန်မာ OS Beta 1.0 ထွက်ရှိ
Facebook Chat Old Version ပြန်သွားလိုသူများအတွက်...
SQL Injection with Backtrack5[Tutorial]
How to Change Mouse Cursor in Ubuntu 11.10 Unity G...
Ubuntu 11.10 – Enable Burmese Keyboard
Ubuntu 11.10 install လုပ်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲ
Ubuntu 11.10 Install လုပ်ပုံ Movies
Ubuntu OS အသုံးပြုသူများအတွက် အကူအညီ ပေးနေသည့် LoC...
Ubuntu 11.10 Install Guide
CyberLink PowerDVD v11.0 with keygen
iPhone,iPad နှင့် iPod touch တို့အတွက် Original Fi...
iPhone,iPad,iPod touch တွေအတွက် iOS5firmware ကို...
အန္တရယ်ရှိသော Malicious Codes များနှင်. Vulnerabili...
Remote Desktop Connection ဆိုတာဘာလဲ။
My IP တဲ့ ဗျာ..သုံးချင်ရင်...
Robots.txt File In Blogger Sites
G-Mail ၏လျှို့ ဝှက်ချက်များ (e-book)
Trace သမားတွေအတွက် VTrace
Trace Country and city (using ip)
How To Make An Autorun CD/DVD?
Virus Which Will Open and Close Your CD/DVD-Rom
Windows Doctor 2.7.1 Full Version
Google Accounts lock ကျနေရင်သုံး၇န်
VZO/Skype စတဲ့ နှစ်ခုဖွင့် မရတာတွေကို တစ်ပြိုင်နက်...
iPad,iPhone,iPod touch များတွင် Firmware upgrade လ...
iPad,iPhone,iPod touch တွေအတွက် Photo editing appl...
Wifi Hack Software များစုစည်းမှု
USB Write Protected Error အားဖြေရှင်းကြည့်ခြင်း
DVD VCD အခွေထုတ်ချင်သောသူများအတွက်ဆော့ဝဲကောင်းလေးတ...
Making USB for installing Backtrack 5:-
Adobe Photoshop CS5 Extended Crack And Serial Keys
Remove "Windows Genuine Notice" in Windows 7
Remove Windows Genuine Notification in Xp
Windows XP Genuine Maker လိုအပ်သူများအတွက်ပါ
အသုံးဝင်သော GMail Keyboard Shortcuts
အသုံးဝင်သော Bios Control shortcut Key များ
လိုအပ်လာရင်အသင့်သုံးနိုင်ဖို့ Samsung Secret Codes
လိုအပ်လာရင်အသင့်သုံးနိုင်ဖို့ Nokia Secret codes
The Ultimate Virus Protection: Sanboxie
Registry Tricks အကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်
Top 20 Hacking Tools
Vulnerability Assessment Tool: RETINA
Member Register Ubuntu Myanmar LoCo Team
Vulnerability Assessment Tool: Nessus
Gmail To IP, IP To Location
Gmail Useful tool
သင့် EMAIL အဟက်မခံရအောင် ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်လေးတွေ
Blog hack မခံရအောင် ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲ။
picasa_3.0-current_i386.deb for Ubuntu 11.10
ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို online ကနေ နေ့စဉ် ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ
OSPF Topology in GNS3
Mediafire ဆိုက်ကနေ ဘယ်လို Download လုပ်ရမလဲ
Epson t13 resetter
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော Hacker Magazine
How to speed up your connection
NOKIA Touch screen phone များအတွက် မြန်မာဖောင့်
Super Phisher 1.0
Language Bar က Zawgyi ကီးဘုတ် Icon ပြောင်းကြည့်ရအောင်
Cómo surgir en un mercado en Internet
အကောငျ့ဖကျြသိမျး ဒါမှမဟုတျ နာမညျပွောငျးခငျြပါတယျ
Python လလေ့ာကွမယျ အပိုငျး​ (၁)
USB Stick မှ Windows7တငျကွညျ့ခွငျး
အိုင်တီလောကမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ CISCO
ဒီ I P က ဘယ် Location ကလဲဆိုတာ လိုက်ရှာမယ်
BackTrack Live USB Install